RAKOTOARIVONY JEAN PIERRE : AZA MANAIKY INTSONY AMIN’ITY FARANY ITY – MyDago.com aime Madagascar
RAKOTOARIVONY JEAN PIERRE : AZA MANAIKY INTSONY AMIN’ITY FARANY ITY
Ao anatin’ny tolona mivaivay isika hoy ny filohan’ny antoko zanak’i dada Rakotoarivony Jean Pierre androany teny amin’ny Magro Behoririka. Na dia malemilemy aza ny fahitana ny olona etsy sy eroa, na dia malefadefaka ny fiteny, aoka isika tsy ho ketraka. Efa nanao araka izay azo atao, araka ny rariny sy ny hitsiny hoy izy isika ary nitsinjo hatrany ny tsy mba hisian’ny korontana sy rà latsaka.Nandefitra hatrany hatrany na dia manana ny rariny aza isika nefa kosa aza manaiky ho rebireben’ny olona fa rehefa avy eo ianao raha mbola handeha ho any dia ho hitsahiny eo an-tampon-dohantsika. Aza manaiky intsony amin’ity farany ity hoy ity mpanao politika ity. Momba ny raharaha any Mahajanga dia nambarany fa loham-boto no misy. Ny dikan’izany dia hanaovana fampitahorana hoe mihetse eo ianareo fa toy izao no hanaovanay azy. Tao amin’ny Cst hoy izy dia nisy fivoriana nandavana ny herisetra izay herisetra tsy fidaroahan amin’ny kibay fa fitifirana. Taiza hoy Jean Pierre no nisy an’izany , zanaka Malagasy no tifirinao amin’ny bala tena izy nefa ianao ray amandreny. Tsy azo ekena izany. Tsymbola hanaiky mihitsy ny ray amandreny mpitarika antsika satria manana ny marina isika. Aza kivy hoy izy fa ao amintsika ny fandresena ary tsy maintsy mandresy isika fa ny olona diso no resy.
1 réflexion sur « RAKOTOARIVONY JEAN PIERRE : AZA MANAIKY INTSONY AMIN’ITY FARANY ITY »
Hijoro isika hiaro ny safiditsika,ka tsimaintsy atao ny cofrontation ny pv,ny buletin,ny liste.Ka raha vao mampiasa hery ny EMMOREH/EMMONAT.Hitatsika ny misy ny trano fonenany(zandary sns)ny vady aman_janany,ny sekoly ianarany
SAHIA MIJORO MIARO
Précédent Article précédent : RAVELONANOSY MAMY TIANA : MILA MIOMANA ISIKA
Suivant Article suivant : RAVELOSON CONSTANT : MBA TE HAHATOKY ANAREO CES NY MALAGASY MANONTOLO, KA ASAKASAKAREO AMIN’IZAY ATAONAREO